२२ वर्षपछि अहिले यसरी बन्यो ‘पापी लर्के जोबन’ गीत भाइरल ! »
‘‘फिल्म हिरोमा रहेको ‘तिम्रो मन त चक्कु छरी यो मन सारङ्गी’ भन्ने गीतमा मेरो र राजेश हमालको प्रफम्स छ। तर यो गीतभन्दा ‘पापी लर्के जोबनले’ भन्ने गीत मलाई खुबै मन परेको थियो। र त्यो ‘पापी लर्के जोबनले’ भन्ने गीत धेरै चल्ला जस्तो लागेको थियो। तर अर्को गीत ‘चक्कु छुरी’ भन्ने गीत व्यापक चल्यो। मलाई भने मेरो अभिनय नभए पनि ‘पापी लर्के जोबनले’ भन्ने गीत असाध्यै मन पथ्र्याे। अनि मलाई लाग्यो किन ‘पापी लर्के जोबनले’ भन्ने गीत हिट भएन। किन ‘चक्कु छुरी’ भन्ने चाहिँ हिट भयो होला लागेको थियो। अहिले टिकटकमा यो गीत धेरै चल्दा मलाई आनन्द लाग्यो। आफ्नो टार्गेट बल्ल २२ बर्सपछि मिट भएको लाग्यो। कुनै पनि सिर्जना फ्लप वा हिट भनेर सर्जकलाई वा स्रोता दर्शकलाई दोष हुँदो रहेनछ। एक दिन अवश्य समय आउने रहेछ।’’ यो समाचार नेपालभ्युजमा श्यामसुन्दर पुडासैनीले लेखेका छन
इन्डियन आइडल १२ को सबैभन्दा उत्कृष्ट जोडी अरुणिता र पवनदीपले बिबाह गरेका हुन् ?
४ पुष २०७८, आईतवार १६:४४
यस्ता पो अभिनेता : अनाथ गरिब जेहेन्दार दलित युवतीलाई प्रकाश राजले बनाए रियल हिरोइन
३ पुष २०७८, शनिबार ११:२६
विक्कीसंग यस्तो सर्त राखेर विवाह गरेकी रैछन् कट्रिनाले
२९ मंसिर २०७८, बुधबार १४:२५
नायक सलिनमान बनियाँले दिए आफ्नी प्रेमिकालाई एक करोडमाथिको गाडी उपहार (फोटो सहित)
२९ मंसिर २०७८, बुधबार १२:३५
२८ मंसिर २०७८, मंगलवार २०:२९
२८ मंसिर २०७८, मंगलवार १५:४३